बलियो मुटु र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि साइक्लिङ
You are at:Home»बिचार»बलियो मुटु र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि साइक्लिङ
By bktnews Posted on	 August 22, 2019 बिचार
काठमाडौँ । अहिले धेरैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ मोटोपन । मोटोपनसँगै मान्छे अनेक रोगको जोखिममा छन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि । मोटोपन कसरी घटाउने ? गजबको काइदा हो साइक्लिङ ।
साइक्लिङका यति धेरै फाइदाहरु भएपछि तपाईं(हामी पनि आजैदेखि साइक्लिङ गर्न थाल्ने कि?
प्रकाशित मितिः २०७६ भदौ ५ बिहिबार